ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ မယ်ရီဒါမြို့၏ လမ်းပေါ်တွင် “နာရီကောင်လေး” အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသော ယောက်ျားကလေး တစ်ဦး
ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးသည် ငယ်ရွယ်သူများအတွက် အထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကို အထူးတလည် အာရုံစိုက်သည့် ကလေးသူငယ်များ၏ လူ့အခွင့်အရေး ဖြစ်သည်။၎င်းတို့တွင် ဇီဝဗေဒအရတော်စပ်သော မိခင်ဖခင်ရင်းတို့နှင့် ပေါင်းဖက်နိုင်ခွင့်၊ လူသားနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝိသေသတို့အပြင် အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော အစားအစာ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကျင့်သုံးသော အစိုးရကတာဝန်ယူသည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကလေး၏ အသက်အရွယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် သင့်လျော်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများလည်း ပါဝင်သည်။ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ကလေးများ မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော လှုပ်ရှားမှုအတွက် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ခွင့်ပြုခြင်းမှသည် မတော်မတရားပြုခံရခြင်းမှ ကာယဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကို ကလေးသူငယ်များ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအထိ ပါဝင်ပါသည်။"မတော်မတရားပြုခံရခြင်း"ဟုဆိုရာ၌ ပါဝင်သောအချက်အလက်များမှာမူ စကားစစ်ထိုး ငြင်းခုံဆွေးနွေးဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ အခြားအခွင့်အရေးများမှာ စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ကျွေးမွေးထိန်းသိမ်း ပညာပေးခြင်းတို့ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများဖြစ်သည်။
၃ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး သမိုင်းဝင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
၄ အခွင့်အရေး အမျိုးအစားများ
၅ လွတ်လပ်စွာ ကြီးပြင်းစေခြင်း
၆ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ
၇ ကလေးသူငယ်၏ အခွင့်အရေးများအပေါ် သဘောတူညီချက်
“ကလေးတစ်ယောက်ဆိုသည်မှာ ဥပဒေအရ အသက်အပိုင်းအခြား ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိလျှင် အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်အောက်ရှိ မည်သည့်လူသားမဆို ကလေးဖြစ်သည်။”ကော်နဲလ် တက္ကသိုလ်အရ ကလေးသည် လူတစ်ဦးဖြစ်သည်၊ လက်အောက်ခံလူသားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ၊ မိဘတွင် ကလေးအပေါ်လုံးဝ စိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ရှိသည်၊ သို့သော် ဤသည်မှာ အမေရိကန်အမြင် ဆန်လွန်းသည်။ “ကလေး” ဆိုသည့် ဝေါဟာရသည် လူမမယ်ဟု သေချာပေါက် မဆိုလိုသော်လည်း အရွယ်ရောက်ပြီးကလေးများနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီး အမှီအခိုမရှိသော ကလေးများလည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။“အပျိုလူပျိုပေါက်”၊ “ဆယ်ကျော်သက်”၊ သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှ“လူငယ်” ကဲ့သို့ ငယ်ရွယ်သူများကို ဖော်ညွှန်းလေ့ရှိသော အခြားဝေါဟာရများ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ မရှိပါ၊ သို့သော် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများသည် လူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုမှ ခွဲထွက်လာသည်ဟု ယူဆသည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေး နယ်ပယ်သည် ဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် အကျင့်သိက္ခာ နယ်ပယ်တို့နှင့် ဆက်နွယ်သည်။
ဥပဒေအရ လူမမယ်များဖြစ်သည့်အတွက် လောကတွင် လူသိများသော မည်သည့် တရားဆုံးဖြတ်ရေးအာဏာတို့တွင်မှ ၎င်းတို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှု သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ မိမိကိုယ်မိမိ အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် များချရန် ကလေးသူငယ်များတွင် အခွင့်အရေး မရှိပါ။ ၎င်းတို့ကိုယ်စား မိဘများ၊ လူမှုရေးလုပ်သားများ၊ ဆရာများ၊ လူငယ်လုပ်သားများနှင့် အခြားသူများ အပါအဝင် ၎င်းတို့ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်သော အရွယ်ရောက်သူများကို အခြေအနေ အကြောင်းခြင်းရာပေါ်မူတည်၍ ထိုအခွင့်အာဏာအား အပ်နှင်းထားသည်။အချို့က ဤအခြေအနေသည် ကလေးများ၏ဘဝအပေါ် လုံလောက်မှုမရှိသော အုပ်ထိန်းမှု ဖြစ်ပြီး ကလေးများကို အားနည်းသူများဖြစ်စေသည်ဟု ယူဆကြသည်။
လူးဝစ္စ အယ်လ်သူဆာသည် ကလေးများအပေါ်သက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ဤတရားဥပဒေဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ယန္တယားကို "အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိရိယာတန်ဆာပလာများ" အဖြစ် ပုံဖော်သည်။ကလေးသူငယ် ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်း၊ ပညာသင်ယူရေး အခွင့်အလမ်းများ မရှိခြင်းနှင့် ကလေးအလုပ်သမားများ ဖြစ်စေခြင်းဟူသော အရွယ်ရောက်သူများက ကလေးသူငယ်များ ကို မတော်မတရားပြုခြင်းနှင့် အသုံးချ အမြတ်ထုတ်ခြင်း ရလဒ်များကို ဖုံးကွယ်ရန် အချို့သတင်းဝေဖန်သူများက အစိုးရပေါ်လစီကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းပုံများကို ကိုင်စွဲထားကြသည်။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်သော် ကလေးသူငယ်များအပေါ် လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ၎င်း ပြုမူသည့်နည်းကို ပြန်လည် ဆင်ခြင်ရန်အတွက် လူနည်းစုအုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။သို့သော် ဤသို့သော ရှုမြင်ချက်ကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ဝေမျှသော အထောက်အထား မရှိပါ။သုတေသီများက ကလေးသူငယ်များကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်သူများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အသက်အရွယ်တွင်မဆို ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်အတွင်းတွင် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးကို အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ဖြစ်မှုသည် ပို၍ ထင်ရှားလာသည်။ဟီလာရီ ကလင်တန် (ထိုအချိန်က ရှေ့နေတစ်ဦး)၏ 1973 တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော စာအုပ်တစ်ခု၌ ကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးသည် “အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်လိုအပ်နေသည့် ဆောင်ပုဒ်” တစ်ခုဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ သုတေသီအချို့၏ အဆိုများအရ ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေး အယူအဆသည် ကောင်းမွန်စွာ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားခြင်း မရှိသေးပေ။ အနည်းဆုံး တင်ပြချက်တစ်ခုအရ ကလေးများက ရယူထားသော အခွင့်အရေးများအတွက် ထူးခြားသည့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် သို့မဟုတ် သီအိုရီ မရှိပါ။ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ကလေးသူငယ်၏ ဘဝနှင့် ဥပဒေတို့၏ ဖြတ်မှတ်အဖြစ် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုသည်။ ၎င်းတွင် လူငယ်ရာဇဝတ်မှု၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားစီရင်ရေး စနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သော ကလေးများအား တရားစွဲဆိုမှု၊ သင့်လျော်သော ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် ထိရောက်သော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အစိုးရမှထောက်ပံ့သော ကလေးသူငယ်များအတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကာကွယ်မှု၊ ၎င်းတို့၏ မူလဇစ်မြစ်၊ လူမျိုး၊ လိင်၊ မသန်စွမ်းမှု သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများမည်သို့ပင်ရှိစေ ကလေးသူငယ်များအားလုံး ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ရှေ့နေလိုက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးကို လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ၏ ကျယ်ပြန့်သော အကြောင်းအရာများ အပါအဝင် နည်းလမ်းပေါင်း များစွာဖြင့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုကြသည်။ အခွင့်အရေးများသည် ယေဘုယျ ပုံစံ နှစ်မျိုး ဖြစ်နိုင်သည် - ကလေးများအတွက် ဥပဒေအောက်တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ရှေ့နေလိုက်သောသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မှီခိုခြင်းကြောင့် ကလေးများအပေါ် ကျူးလွန်သော ထိခိုက်နစ်နာမှုတို့မှ ကာကွယ်ရန် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် တောင်းဆိုချက် ပြုလုပ်သောသူများတို့ ဖြစ်သည်။ ဤသည်တို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်မှုပေးရန်ရပိုင်ခွင့်အဖြစ် အမှတ်အသား ပြုကြသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများကို သုံးမျိုးခွဲခြားပြထားသည်။
ထောက်ပံ့မှု - ကလေးသူငယ်များတွင် ပြည့်စုံလုံလောက်သော နေထိုင်မှု အဆင့်အတန်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာသင်ကြားရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆော့ကစားခွင့်တို့ကို ရရှိရန် အခွင့်အရေး ရှိသည်။ သင့်တင့်မျှတသော စားသောက်မှု၊ အိပ်ရန် နွေးထွေးသော အိပ်ယာနှင့် ကျောင်းတက်ရန် အခွင့်အလမ်းတို့ ပါဝင်သည်။
ကာကွယ်မှု - ကလေးများကို မတော်မတရားပြုခြင်း၊ လျစ်လျူရှုခြင်း၊ အသုံးချ အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန် အခွင့်အရေး ရှိသည်။ ကလေးများ ကစားရန် လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာများ၊ အပြုသဘောဖြစ်သော ကလေးသဘာဝ အပြုအမူ၊နှင့် ကလေးများ၏ စွမ်းရည်များ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ပါဝင်မှု - ကလေးသူငယ်များတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် အစီအစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများရှိရန် အခွင့်အရေး ရှိသည်။ စာကြည့်တိုက်များနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်များ၊ လူငယ့်အသံ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ကလေးသူငယ်များ၏ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ကလေးသူငယ်များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများအဖြစ် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက် သို့မဟုတ် အတိုကောက် CRIN သည် အခွင့်အရေးများကို အုပ်စုနှစ်စု ခွဲထားသည်။
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ သည် အစားအစာ၊ နေထိုင်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးကဲ့သို့ လူသားတို့၏ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် လိုအပ်သော အခြေအနေများနှင့် စပ်ဆိုင်သည်။ ပါဝင်သည့်အခွင့်အရေးများမှာ ပညာသင်ခွင့်၊ ပြည့်စုံလုံလောက်သော အိမ်ရာ၊ အစားအစာ၊ ရေ၊ ရရှိနိုင်သမျှ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ကျန်းမာရေး တို့အတွက် အခွင့်အရေးများ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်တွင် ရပိုင်ခွင့်များအပြင် လူနည်းစုနှင့် မူလနေထိုင်သူ တိုင်းရင်းသားများအတွက် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ကို တစ်ခါတစ်ရံ “တတိယမျိုးဆက်သစ် အခွင့်အရေး” ဟုလည်းခေါ်၍ လုံခြုံပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ရန်နှင့် ထိုလူစုတွင် ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများရရှိရန်တို့ ပါဝင်သည်။
အမ်နက်စတီ အင်တာနေရှင်နယ်သည် လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရသည့် လေးခုသော ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို ပွင့်လင်းစွာ ထောက်ခံရာတွင် ဝန်ခံချက်ဖြင့် လွှတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲ လူငယ်များကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်း ရပ်တန့်ရေး၊ ကလေးသူငယ်များကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချရေးအတွက် သွတ်သွင်းခြင်းကို ရပ်တန့်ရေး၊ အသက် 21အောက် ငယ်သူများကို သေဒဏ်စီရင်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် စာသင်ခန်းတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အသိမြှင့်တင်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူထုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွင် ကလေးသူငယ် အလုပ်သမား၊ လူငယ်တရားစီရင်ရေး၊ မိဘမဲ့ကလေးသူငယ်များနှင့် စွန့်ပြစ်ခံရသော ကလေးများ၊ ဒုက္ခသည်များ၊ လမ်းပေါ်မှကလေးသူငယ်များနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာကို နာကျင်စေသော ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ပညာအထူးလေ့လာမှုက ယေဘုယျအားဖြင့် အခွင့်အရေးများကို တစ်ခုချင်းသီးသန့် သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးကို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်သည်။ အောက်ပါ အခွင့်အရေးများသည် “ကလေးသူငယ်များကို ကျန်းမာစွာလွတ်လပ်စွာ ကြီးပြင်းစေသည်”-
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်
ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေသော အခြားအကြောင်းအရာတို့တွင် ကလေးသူငယ်များကို ရောင်းစားခြင်း၊ ကလေးပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့် ကလေး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလုပ်ငန်းတို့ ပါဝင်သည်။
မာလီနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေး၊ ချီလီနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေး၊နှင့် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေး
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းကို ယနေ့ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားဝင် စံချိန်စံနှုန်းများအတွက် အခြေခံအဖြစ် ယူဆကြသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို ရည်ညွှန်းသော သဘောတူညီချက်များနှင့် ဥပဒေများ များစွာရှိသည်။ အဂ္ဂလန်တိုင်း ဂျက်ဘ်နှင့် သူမ၏ ညီအစ်မဖြစ်သော ဒေါ်ရသီ ဘက်ခ်စ်တန်တို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့တွင် 1919 ခုနှစ်က မူကြမ်းရေး၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီးက ထောက်ခံချက် ပေးသွင်းကာ ကုလသမဂ္ဂက 1946 ခုနှစ်တွင်ကျင့်သုံးရန်လက်ခံခဲ့သော 1923 ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကြေငြာချက်စာတမ်း အပါအဝင် လက်ရှိနှင့် သမိုင်းဝင် စာရွက်စာတမ်း အချို့သည် ဤအခွင့်အရေးများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ နောင်တွင် ထိုကြေငြာချက်ကို ကလေးသူငယ်၏ အခွင့်အရေးများအပေါ် သဘောတူညီချက်၏ အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
ကလေးသူငယ်၏ အခွင့်အရေးများအပေါ် သဘောတူညီချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
ကုလသမဂ္ဂ၏ 1989 ကလေးသူငယ်၏ အခွင့်အရေးများအပေါ် သဘောတူညီချက်၊ သို့မဟုတ် CRC သည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံ၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ဖြစ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ စုစည်းရန် ပထမဦးဆုံး တရားဝင် ပူးပေါင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ကလေးသူငယ်၏ အခွင့်အရေးများ ကော်မတီက ကြီးကြပ်သည်။ ၎င်းသဘောတူညီချက်ကို တရားဝင်အတည်ပြုသော နိုင်ငံ့အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် သေချာစေရန် ကတိပြုကြပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းရှေ့တွင် ဤကတိပြုချက်အတွက် တာဝန်ယူရန် သဘောတူညီကြသည်။ CRC သည်တရားဝင်အတည်ပြုသောနိုင်ငံပေါင်း 190 ဖြင့် အများဆုံး ကျယ်ပြန့်စွာအတည်ပြုခံရသော လူ့အခွင့်အရေး သဘောတူညီချက် ဖြစ်သည်။ CRC သည် အဓိက အခြေခံသဘောတရား လေးခုကို အခြေခံသည်၊အမည်အားဖြင့်ဆိုသော် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိရေး၊ ကလေးသူငယ်၏ အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ရှင်သန်ရာဘဝအခွင့်အရေး၊ ရှင်သန်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ၎င်းတို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ကလေး၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ(ကလေး၏ အသက်နှင့် ရင့်ကျက်မှုပေါ်လိုက်၍)ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတရားရုံး၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားနှင့် ရဝမ်ဒါ ခုံရုံးအဖွဲ့နှင့် ဆီရာလီယွန်း အတွက် အထူးခုံရုံးကဲ့သို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယန္တယားများနှင့်အတူ CRC သည် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများ အကြောင်းကို သိသာထင်ရှားစွာ မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို သေချာစေရန်နှင့် ပြည်ထောင်စု၏ အောင်မြင်သော အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယန္တယားများ များစွာရှိသည်။ ထိုအထဲတွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာ သီးသန့်ကဏ္ဍအတွက် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး ကော်မတီ ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို ကလေးသူငယ်၏အခွင့်အရေးအပေါ် သဘောတူညီချက်များကို ပြည့်ဝစွာ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် လိုက်နာခြင်းကို မြှင့်တင်ရန်အပြင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာ သီးသန့်ကဏ္ဍနှင့် ၎င်း၏ အကြိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဦးစားပေးထားသော ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများကို သေချာစေရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကို “လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်တွင် မြင့်မားသည့် နိုင်ငံရေးအသိ ရှိလာစေသော ကော်မစ်ရှင်ထက် ကမ္ဘာအနှံ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ရှုတ်ချခြင်းတွင် ပိုမို၍ ဓမ္မဓိဌာန်ကျခြင်း၊ ယုံကြည်ထိုက်ခြင်းနှင့် ထိရောက်ခြင်း ရှိစေရန် မျော်လင့်ချက်ဖြင့်” ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်၏အခွင့်အရေးအပေါ် သဘောတူညီချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် 1983 ခုနှစ်တွင် မူလက ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းမှာ အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကလေးသူငယ်များ၏ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိပြီး အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်မှာ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်သော နိုင်ငံသားများက သီးခြားစီ တောင်းဆိုချက်များ တင်သွင်းခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် အများပြည်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ကိုယ်စားပြုရန် ဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ အကျိုးဆောင်သည် ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၊ သတင်းစာတိုက်တစ်ခု၊ NGO တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် အထွေထွေ အများပြည်သူများအတွက်လည်း အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Save Child Rights and Stop Child Labour Archived 24 August 2011 at the Wayback Machine.
2 year old sentenced to3years imprisonment Archived 27 September 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကလေးသူငယ်များ၏_အခွင့်အရေး&oldid=623280" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၃:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။